NRO Blue Apk Dhawunirodha YeAndroid [Mutambo Mutsva] - Luso Gamer
Pakutanga, mapurogiramu akasiyana emitambo akagoverwa pano pawebsite yedu. Izvo zvine mukurumbira uye zvinonakidza kutamba neshamwari. Asi panguva ino takaunza chimwe chinhu chakasiyana uye chine chekuita nenyaya yemanga. Ehe, tiri kutaura nezve NRO Blue Apk.
Chaizvoizvo, iko kushandisa kwakabatana neyakakurumbira manga nyaya inonzi Dragon Story. Ipo nyika iri pasi pekurwiswa kukuru nemamonsters. Ikozvino tariro chete yasara ndeye magamba matatu anokwanisa masimba akasiyana uye hunyanzvi.
Saka wagadzirira kununura vanhu uye kusunungura nyika kubva kune zvakaipa zvikara. Wobva wadhawunirodha NRO Blue App kubva pano nekudzvanya kumwe chete. Rangarira kuti tiri kupa iyo yepamutemo vhezheni ye 2D Gameplay iyo yakagadzikana kuisa.
Chii chinonzi NRO Blue Apk
NRO Blue Apk ndeye online chiitiko chemitambo application yakagadziriswa neTeaMobi. Muno mukati me gameplay akawanda akasiyana premium mavara uye sarudzo anowedzerwa. Iwo anozopa yakasarudzika yemitambo chiitiko uchitamba.
Kunyangwe vagadziri vakatoita zvimwe zvakakosha kusimudzira kune yemitambo app. Pakati peaya makiyi ekusimudzira anosanganisira kuvandudzwa kwemagiraidhi uye maitiro ekutamba. Izvo zvinodzora uye mamwe makiyi marongero anowedzerwa kune vatambi.
Saka ivo vanogona kugadzirisa zviri nyore uye kudzora gameplay vachitarisa zvavanoda. Mutambo uyu unongobatana chete nenyaya yemanga. Maererano nekuongorora kwevatatu, nyaya yacho yakanzi yakabudirira mukukwezva vaverengi.
Chikonzero chebudiriro huru iyi imhaka yenyaya inoshamisira uye mifananidzo inobata maziso. Kunyangwe kutamba chiitiko chemutambo kunogara kwakasiyana. Uye iwe wagadzirira kuona kutamba neshamwari wobva watora NRO Blue Android.
zita NRO Blue
zera 10 MB
Package Zita com.bluedragonss.boysss
Inodiwa Android 4.0 uye Uyezve
Patinoisa uye kutamba mutambo neshamwari. Ipapo takaiwana yakapfuma muzviwanikwa zvinosanganisira advanced setting dashboard. Kunyangwe nyaya ichitanga nguva inobata maziso, uko nyika inofungidzirwa kuti iri kurwiswa.
Zvikara zvakatotora mukana uye vanhu vanotya mamiriro ezvinhu. Ikozvino tariro yega yegora ndeye magamba matatu. Rangarira hunyanzvi uye masimba egamba zvinokwidziridzwa. Ingoedza kushanduka nemamiriro ezvinhu uye kusimudzira hunyanzvi panguva.
Nokuti pasina simba uye unyanzvi hazvibviri kukunda zvikara. Kunyangwe zvombo zvakasiyana nemasimba zvakakamurwa mukati mechitoro cheprimiyamu. Kuti uvhure zviwanikwa zvine simba zvinoda mari yemutambo nemari.
Kune pfuma yakavanzwa zvakare yakaiswa uye kuongorora izvo pfuma zvinopa zvinokatyamadza zvinongoerekana zvaitika. Izvo zvinoshamisa zvinosanganisira zvombo zvine simba uye mafambiro. Iyo gamer inoda kuongorora nzvimbo idzo mhuka dzisati dzarwisa.
Saka iwe watoverenga iyo manga nyaya uye unoda iwo akakosha pfungwa. Iye zvino wagadzirira kushandisa izvo zviri mukati chaimo gameplay. Zvadaro tinokurudzira kuti vatambi vacho vaise NRO Blue Download mukati me Android smartphone.
Yemahara kurodha Apk.
Kuisa mutambo kunopa yakasarudzika 2D Chiitiko.
Iko vatambi vachanakidzwa negamba rine simba.
Vakapfuma muunyanzvi nesimba.
Kunyoresa kunosungirwa kutamba.
Hapana kunyoreswa kunodiwa kuti utambe.
Akasiyana magamba mavara anowedzerwa.
Dashboard yakasiyana-siyana inowedzerwa.
Mutauro unoshandiswa pano ndeweVietnamese.
Maitiro ekurodha NRO Blue Apk
Kunze uko mawebhusaiti mazhinji anoti anopa akafanana maApk mafaera emahara. Asi muchokwadi, iwo mawebhusaiti ari kupa fake uye akashatiswa mafaera. Saka chii chinofanira kuitwa nevashandisi veandroid mumamiriro ezvinhu akadaro kana vasingakwanisi kumapuratifomu akavimbika?
Saka iwe wavhiringika wobva washanyira webhusaiti yedu uye dhawunirodha yazvino vhezheni yemitambo app. Zvese zvavanoda kuti vaite kungobaya pamusoro peyakapihwa yekurodha bhatani. Takatoisa game yacho takaona pasina serious mukati.
Iyo app yemutambo yatiri kuratidza pano ndeyepakutanga. Takatotamba zvedu ndokuona pasina dambudziko guru mukati. Nekudaro, isu hatimbove isu copyrights ekushandisa. Kana paine chakaipa hatizove nemhosva.
Mazhinji emamwe maitiro-akavakirwa emitambo maapplication anoburitswa uye anowanikwa kurodha kubva kune yedu webhusaiti. Kuisa uye kuongorora iyo mimwe mitambo ndapota isa inotevera Apk's. Ndivo CupHead Kuwedzera Apk uye Oiri Kuchera 3D Apk.
Saka iwe unotoziva nezve iyo nyaya uye wakagadzirira kunakidzwa nenyaya mukati memutambo. Wobva wadhawunirodha uye isa NRO Blue Apk mukati me Android smartphone. Izvo zvinosvikika kuwana kubva pano nekudzvanya imwe sarudzo yemahara.
Categories Action, Games Tags 2D Mutambo, NRO Blue Android, NRO Blue Apk, NRO Blue App, Vadivelu Comedy Blue Download Post navigation